Manasazy Antsika ve Andriamanitra? Avy Aminy ve ny Loza?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Groenlandey Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kimbundu Kirghiz Koreanina Kreôla any Seychelles Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Norvezianina Nzema Ossète Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Tuvalu Vietnamianina Zoloa
Manasazy Antsika ve Andriamanitra?
Nisy tsunami sy horohoron-tany nahatratra 9,0 amin’ny maridrefy Richter tany Japon, tamin’ny Martsa 2011. Hoy ny mpanao politika japoney iray: “Marina fa nalahelo an’ireo tra-boina aho. Mieritreritra anefa aho hoe sazy avy amin’Andriamanitra ilay izy.”
Nisy horohoron-tany tany Haïti tamin’ny Janoary 2010, ka maherin’ny 220 000 no maty. Nilaza ny mpitory teny malaza iray ao amin’ny tele, fa noho ireo mponina tany “nanao fifanekena tamin’ny devoly” no nahatonga izany, ka nila “niverina tamin’Andriamanitra” izy ireo.
Nisy korontana tany Manille any Philippines, ka 79 no maty. Hoy ny mompera iray momba izany: “Maty eritreritra sy mafy fo isika ka te hanaitra antsika Andriamanitra.” Nilaza koa ny gazety iray any amin’io tany io fa “ny 21 isan-jaton’ny olon-dehibe no mino hoe amin’ny alalan’ny fihotsahan’ny tany sy ny rivo-doza ary ny loza hafa”, izay mpitranga matetika any, “no anehoan’Andriamanitra ny hatezerany.”
MARO no mino fa avy amin’Andriamanitra ny loza, mba hanasaziana ny ratsy fanahy. Nisy horohoron-tany sy afo ary tsunami, ohatra, tany Lisbonne, any Portogaly, tamin’ny 1755, ka olona 60 000 teo ho eo no maty. Hoy i Voltaire, filozofa malaza: “Betsaka kokoa ve ny olona ratsy fitondran-tena any Lisbonne raha oharina amin’ny any Paris, izay feno olona tia fahafinaretana?” Olona an-tapitrisany no lasa mieritreritra raha mandefa loza Andriamanitra mba hanasaziana ny olona. Antsoina hoe asan’Andriamanitra mihitsy aza izy ireny any amin’ny tany maro.
Mila mieritreritra àry isika hoe: Mandefa loza tokoa ve Andriamanitra mba hanasaziana ny olona? Sazy avy aminy ve ireo loza be dia be nitranga tato ho ato?
Mailaka hanome tsiny an’Andriamanitra ny olona sasany. Milaza izy ireo fa araka ny Baiboly, dia nampiasa herin’ny natiora Andriamanitra mba handringanana ny ratsy fanahy. (Genesisy 7:17-22; 18:20; 19:24, 25; Nomery 16:31-35) Raha dinihina anefa ireny tantara ireny, dia misy zavatra telo mampiavaka azy. Voalohany, nampitandrina izy vao nandringana. Faharoa, tsy niara-maty ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, toy izay mitranga rehefa misy tondra-drano, ohatra. Izay ratsy fanahy tsy nety niova na tsy nety nihaino ny fampitandremany ihany no noringaniny. Fahatelo, nitady fomba hamonjena ny tsy manan-tsiny izy.—Genesisy 7:1, 23; 19:15-17; Nomery 16:23-27.
Fiainan’olona an-tapitrisany no rava vokatr’ireo loza maro be. Tsy misy porofo manamarina anefa hoe Andriamanitra no nahatonga azy ireny. Inona àry no mahatonga an’ireny loza toa tsy mitsaha-mitombo ireny? Inona no hanampy antsika hiatrika azy ireny? Ho foana ve izy ireny indray andro any? Hamaly izany ireo lahatsoratra manaraka.
Nilaza i Jesosy fa ho be dia be ny loza. Midika inona ho antsika ny fisian’ireny loza ireny?
Hizara Hizara Manasazy Antsika ve Andriamanitra?